२०२१ को सबै भन्दा राम्रो तेल रेडिएटरहरू, कुन छनौट गर्ने?
तपाईंको घरलाई तताउने र यसलाई सकेसम्म सस्तो बनाउनको लागि बाटो खोज्नु एकदमै ओडिसी हुन सक्छ। त्यहाँ मानिसहरू छन् जसले आफ्नो बिजुली दरको विकल्पहरू परिवर्तन गर्छन्, अरूले डबल-ग्लाज्ड विन्डोहरू रोज्छन् र अरू जसले आफ्नो तापको दक्षताको समीक्षा गर्छन्। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका हीटरहरू छन् र प्रत्येकको यसको फाइदा र बेफाइदाहरू छन्। इलेक्ट्रिक चुलो, ग्यास चुलो, थर्मल इमिटर, रेडिएटर आदि। तपाईको घरलाई अझ कुशलतापूर्वक तताउने उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो तेल रेडिएटर.
यस लेखमा हामी तपाईलाई सबै विशेषताहरू बताउन जाँदैछौं जुन तेल रेडिएटर कुशल हुनुपर्दछ र कुन बजारमा सबै भन्दा राम्रो हो।
सबै भन्दा राम्रो तेल रेडिएटरहरू
Orbegozo RF 2000 रेडिएटर ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०1.035। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
AEG RA 5522 - रेडिएटर ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
Grunkel - रेडिएटर ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
बेकन रेडिएटर तेल तेल... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०4। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
De'Longhi TRNS 0505M -... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
Jata R111 रेडिएटर... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०127। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो	Orbegozo RF 2000 रेडिएटर ...
मूल्य गुणस्तर	AEG RA 5522 - रेडिएटर ...
हाम्रो मनपर्ने	Grunkel - रेडिएटर ...
बेकन रेडिएटर तेल तेल...
De'Longhi TRNS 0505M -...
Jata R111 रेडिएटर...
Jata9तत्व तेल रेडिएटर
यो एउटा रेडिएटर मोडेल हो जसमा हामीले तताउने कोठाको आधारमा चर पावर हुन्छ। ध्यान राख्नुहोस् कि 1 वर्ग मिटर कोठा तताउन 80W पावर चाहिन्छ। यस मोडेलमा3पावर स्तरहरू छन्: 2000W सम्म। सबै एक सजिलो रोटरी चयनकर्ताबाट4स्थानहरू (एक बन्दको लागि)।
Jata R109 रेडिएटर...
यो रेडिएटरमा तत्काल तातो प्रणाली छ जसले ठाउँलाई छिट्टै तातो बनाउन मद्दत गर्छ। थप रूपमा, यो उपकरणको अधिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न ओभरहेटिंग विरुद्ध सुरक्षा प्रणाली छ। यसमा स्वचालित रोल-ओभर सुरक्षा पनि छ र यसको बहु-दिशात्मक पाङ्ग्रा डिजाइनका कारण ढुवानी गर्न सजिलो छ।
न केवल यो एक सस्तो कार्य हुनेछ तर तपाईले वातावरण संरक्षण गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ हालको वातावरण संरक्षण नियमहरूको पालना गर्दछ।
Cecotec तयार न्यानो तेल रेडिएटर
यो तेल कूलरमा 9W को शक्ति भएको 2000 मोड्युलहरू छन्। यसले यसलाई घरको कुनै पनि छेउमा राख्न सक्षम हुन मद्दत गर्दछ, किनकि यसले हावा चलाउन र केबल भण्डारण गर्न सक्षम हुने प्रणाली ल्याउँछ। यसमा आवश्यक तापको मात्रा समायोजन गर्न समायोज्य थर्मोस्टेट प्रणाली छ। यसमा इको, मध्यम र अधिकतम प्रकार्य छ क्रमशः 800, 1200, 2000W को शक्तिहरूमा सञ्चालन।
Cecotec रेडिएटर ...
कुनै पनि कोठामा रेडिएटरको ढुवानीलाई सहज बनाउन यसमा एर्गोनोमिक ह्यान्डल र बहुदिशात्मक पाङ्ग्राहरू छन्। यो कुशलतापूर्वक 18-वर्ग मीटर कोठाहरू तताउन सक्षम छ।
यो मोडेल एकदम सरल छ तर यो अझै पनि धेरै कुशल छ। यसमा 11W पावरको 2200 तत्वहरू छन्। यो शक्ति3विभिन्न स्तर मा समायोजित गर्न सकिन्छ, प्रत्येक क्षण को आवश्यकता मा निर्भर गर्दछ।
AEG RA 5522 - रेडिएटर ...
यी स्तरहरू क्रमशः 1000, 1200, 2200W को शक्तिहरूमा काम गर्छन्। यी स्तरहरू थर्मोस्टेटको समावेशको लागि धन्यवाद विनियमित गर्न सकिन्छ। यसलाई एक कोठाबाट अर्को कोठामा ढुवानी गर्न सक्षम हुन यसमा ४ बहुदिशात्मक पाङ्ग्राहरू छन्।
Jata 11 तत्व तेल रेडिएटर
यदि तपाईंको घर ती मध्ये एक हो जुन धेरै चिसो हुन्छ र जाडोमा तातो गर्न धेरै खर्च हुन्छ, यो तपाईंको तेल रेडिएटर हो। यसमा 11 तत्वहरू छन् जुन3शक्ति स्तरहरूमा विभाजित छन्। समायोज्य थर्मोस्टेटको लागि धन्यवाद हामी 2500W सम्मको शक्तिहरू प्रयोग गर्न सक्छौं, क्रमशः। तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, उच्च शक्तिले कोठाहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा तताउन सक्छ।
यसमा तत्काल तातो प्रणाली छ जसले स्पेसलाई द्रुत रूपमा तताउन मद्दत गर्दछ। यसमा अत्यधिक तताउने र अधिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली पनि छ। यसमा स्वचालित रोल-ओभर सुरक्षा छ र यसको बहु-दिशात्मक पाङ्ग्राहरूको कारण एक कोठाबाट अर्को कोठामा ढुवानी गर्न सजिलो छ।
Orbegozo तेल रेडिएटर9तत्वहरू
यो मोडेल प्रत्येक एक को आवश्यकता मा निर्भर गर्दछ। यसमा3पावर स्तरहरू छन् जुन क्रमशः 1000, 1500 र 2000W मा काम गर्दछ। यो कोठा तताउने मा अधिक गति को लागी एक डबल यू ट्यूब प्रणाली छ। यसले यसलाई थप ऊर्जा कुशल बनाउँछ र हामीलाई बिजुली बिल बचत गर्न मद्दत गर्दछ। यसले 25 वर्ग मिटरसम्मको कोठालाई छिट्टै तताउन सक्षम छ।
Orbegozo RF 2000 रेडिएटर ...
यसमा अति तताउनको लागि सुरक्षा सुरक्षा प्रणाली छ। यसको डिजाइनले सम्भावित दुर्घटनाहरूबाट बच्नको लागि ४५ डिग्रीभन्दा बढी झुकेको खण्डमा स्वचालित रूपमा बन्द हुन्छ। यसमा ४ बहुदिशात्मक पाङ्ग्राहरू छन् र केबललाई यसको लागि डिजाइन गरिएको प्वालबाट सङ्कलन गर्न सकिन्छ।
जब हामी तेल रेडिएटरको बारेमा कुरा गर्छौं, यो दिमागमा आउँछ कि तपाईले लिटर र लिटर तेल प्रयोग गर्नुपर्छ। यो यस्तो होइन। हाल तेल रेडिएटरहरूको दक्षता धेरै उच्च छ। इलेक्ट्रिक रेडिएटरहरू र इलेक्ट्रिक कन्भेक्टरहरू जस्तै, यसमा आन्तरिक प्रतिरोध छ। एकसँग अर्कोको भिन्नता यो हो कि यसलाई विद्युतीय प्रवाहमा जोड्नुको सट्टा भित्र रहेको तेलले तताउँछ।
तपाईले तेल थप्नु पर्दैन, यो पहिले नै कारखानाबाट आउँछ। यो एक विशेष तेल हो जुन जल्दैन र सामान्य तेल भन्दा अलि बढी घना हुन्छ। तपाईले यसलाई हरेक पटक वा त्यस्ता केहि परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन। तपाईंले यसलाई बिजुलीमा जडान गर्नु पर्छ, तापक्रम विनियमित गर्नुहोस् र कोठा तातो हुनको लागि पर्खनुहोस्।
तेल कूलर कसरी छनौट गर्ने
तेल रेडिएटर छनौट गर्दा हामीले केही महत्त्वपूर्ण चरहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। हामी तिनीहरूलाई प्रत्येक विश्लेषण गर्न जाँदैछौं:
पावर: तेल रेडिएटरको शक्ति हामीले तताउन आवश्यक भएको कोठाको आकारको आधारमा निर्धारण गरिनेछ। 1 वर्ग मिटर सतहलाई तताउन, लगभग 80W पावर चाहिन्छ। हामीले हाम्रो कोठाको मापन थाहा पाउनु पर्छ र छिट्टै र कुशलतापूर्वक कोठा तताउन सक्षम हुनको लागि समान वा उच्च शक्ति भएको तेल रेडिएटर किन्नु पर्छ।
तत्वहरूको संख्या: तत्वहरू ठाडो बारहरू हुन् जुन तताउनका लागि जिम्मेवार छन्। अधिक तत्व भएकाहरूले उच्च गतिमा तताउन सक्षम हुनेछन्।
थर्मोस्टेट: यदि हामी हाम्रो आवश्यकता अनुसार तापक्रम विनियमित गर्न चाहन्छौं भने यो आवश्यक छ।
सुरक्षा प्रणाली: यदि हामी तेल रेडिएटरहरूको प्रयोगमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छौं भने, हामीले अति तताउने वा ओभरटर्निंग विरुद्ध सुरक्षा प्रणाली भएकाहरू किन्नुपर्छ।
ऊर्जा दक्षता: हामीलाई मुख्यतया तेल कूलर चाहिन्छ जसले काम गरिरहेको समयमा थोरै बिजुली खपत गर्छ। हामीले तताउन चाहेको सतहमा पावर समायोजन गर्नुपर्छ र हाम्रो आवश्यकताअनुसार उपयुक्त रेडिएटर किन्नु पर्छ।
कम खपत इलेक्ट्रिक रेडिएटरको तुलनामा तेल रेडिएटरका फाइदाहरू
तेल रेडिएटरको अगाडि रहेको मुख्य फाइदाहरू मध्ये एक ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक रेडिएटर ऊर्जा दक्षता छ। र यो हो कि जब हामी कम खपत इलेक्ट्रिक रेडिएटर विच्छेदन गर्छौं यसले गर्मी उत्सर्जन रोक्छ। यो तथ्यको कारण हो कि प्रतिरोधकहरू बन्द हुन्छन् र जसरी यो उच्च गतिमा तातो हुन्छ, उही गतिमा ताप पनि हराउँछ। तेल कूलरले यसलाई बन्द गरेपछि पनि तातो उत्पन्न गर्न जारी राख्छ।
कम खपत हुने बिजुली रेडिएटरहरू साना कोठाहरू तताउन वा अन्य तताउने प्रणालीहरूलाई पूरक बनाउन तयार हुन्छन्। यद्यपि, तेल रेडिएटरहरूले गर्छन् ठूला कोठाहरू तताउनका लागि उपयुक्त। तेल रेडिएटरहरूले प्रयोगको क्रममा कुनै आवाज गर्दैनन् जबकि कम खपत इलेक्ट्रिकहरूले गर्छन्।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईले तेल रेडिएटरहरू बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त हुन्छ।
1 सबै भन्दा राम्रो तेल रेडिएटरहरू
1.1 Jata9तत्व तेल रेडिएटर
1.2 Cecotec तयार न्यानो तेल रेडिएटर
1.3 AEG RA 5522
1.4 Jata 11 तत्व तेल रेडिएटर
1.5 Orbegozo तेल रेडिएटर9तत्वहरू
2 यो कसरी काम गर्दछ
3 तेल कूलर कसरी छनौट गर्ने
4 कम खपत इलेक्ट्रिक रेडिएटरको तुलनामा तेल रेडिएटरका फाइदाहरू
स्टोभ » तेल रेडिएटर